Bitcoin banknotes dia antenaina mba ho hita ao Singapore ny faran 'ny taona - Blockchain News
Mey 4, 2018 Admin
Bitcoin banknotes dia antenaina mba ho hita ao Singapore ny faran 'ny taona
Tngem, ny kitapom-batsy fitaovana crypto orinasa efa nanomboka ny mpanamory ny fivarotana ny Bitcoin banknotes an'i Singapore tsena.
Tangem mikendry ny hanao varotra ara-batana mampiasa cryptocurrency mahazatra kokoa ny noob mpanjifa, ary mikasa ny hamokatra an-tapitrisany ny fanamarihana ny faran 'ny taona.
ao Singapore, firenena iray izay ny fitsipika tena manohana ny roa blockchain cryptocurrency sy teknolojia, ny an-tsoratra dia ho azo vidiana ao amin'ny Suntec City sampana ny famolavolana fivarotana rojo Megafash.
The Notes, izay no ho avy amin'ny anaram-piangonana ny 0.01 ary 0.05 BTC ($92 ary $463 mifanaraka), raha ny marina dia toy ny fitaovana banknote-mpanjifany.
Ny iray amin'ireo lehibe Japana ...
Arzantina banky becom ...
Previous Post:Coinbase mikasa ny hanokatra birao vaovao ao Chicago
Next Post:12 Shinoa ampiasaina blockchain amin'ny banky 2017
Mey 18, 2018 amin'ny 5:38 AM
Mey 31, 2018 amin'ny 3:29 AM
Jona 2, 2018 amin'ny 1:00 PM